dopamine သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွဲလမ်းမှုအတွက်အပြစ်ရှိသလား။ (၂၀၁၅) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စှဲအဘို့အအပြစ်တင်ဖို့ dopamine လား? (2015)
အဲရစ် Bowman, အဆိုပါစကားပြောနေဖြင့်ဒီဇင်ဘာလ 3, 2015 အများစုမှာသုတေသီများလူ့ဦးနှောက်နှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များ၏ရှိသူများအကြားအဓိကသော့ခြားနားချက်ကျွန်ုပ်တို့၏၏အရွယ်အစားနှင့်အရှုပ်ထွေးကြောင်းသဘောတူ ဦးနှောက် cortexဦး နှောက်ရဲ့အာရုံကြောတစ်ရှူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုareaရိယာကိုအာရုံစူးစိုက်လေ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘ ၀ သည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏အဓိကလက်ရာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုဦးနှောက်ဆဲလ်များ၏သေးငယ်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအကြားနီးပါးတူညီသော-bits, လျစ်လျူရှု ဓာတု dopamine အခြားအနှငျ့ဆကျသှယျဖို့ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ.
Dopamine ဖြစ်ပါသည် မကြာခဏဖော်ပြထား ဦး နှောက်၏“ အပျော်အပါးဓာတုပစ္စည်း” ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများစွာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ။ တခြားအာရုံခံမှမက်ဆေ့ခ်ျများထုတ်လွှင့်ဖို့ midbrain အတွက်အာရုံခံတဲ့စပျစ်သီးပြွတ်နေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ dopamine အာရုံခံ သေးငယ်သည် (လူ့ ဦး နှောက်ရှိအာရုံခံ၏ ၀.0.0006%) ဖြစ်၍ နို့တိုက်သတ္တဝါအားလုံးနှင့်လိပ်ကဲ့သို့သော“ ရိုးရှင်းသော” တိရိစ္ဆာန်များတွင်လည်းတွေ့ရသည်။
အဆိုပါ 1950s, သုတေသီများအတွက် ရှာဖွေတွေ့ရှိ ကြွက်ဟာဆက်သွယ်သောအာရုံကြောအစုအဝေး၏ဆွပျော်မွေ့သည်ထင်ရှားကြောင်း dopamine အဆိုပါ forebrain မှာသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်နှင့်အတူအာရုံခံ။ အဆိုပါကြွက်များဆွဒီလိုမျိုးများအတွက်လီဗာကိုနှိပ်ဖို့သငျယူလျက်, အမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ left, နေ့ရက်ကာလ၌ဒါကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လုပ်ပေးမယ်လို့လိမ့်မယ်။
အလားတူ (နှင့်လုံးလုံးသိက္ခာမဲ့) စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအပေါ် 1970 အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် လူ့လူနာ။ အဆိုပါကြွက်များကဲ့သို့ပင်လူနာသုံးနာရီ session ရဲ့သင်တန်းကျော် 1500 ကြိမ်တက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆွကာလအတွင်းအပျော်အပါး၏ခံစားချက်များကိုသတင်းပို့ခြင်း, dopamine အာရုံကြောအစုအဝေးလှုံ့ဆော်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။
ထိုအချိန်မှစ. လေ့လာမှုများပြုလုပ်ပြခဲ့ကြ dopamine စနစ်က သာယာသောအတွေ့အကြုံများတဲ့ကျယ်ပြန့်အားဖြင့် activated နိုင်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောစားအဖြစ်, လိင်ဆက်ဆံ, လက်စားချေရတဲ့, အနိုင်ရတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်း, ဂီတကိုနားထောင်ခြင်း, ပိုက်ဆံဝင်ငွေ နှင့်ရယ်စရာကာတွန်းဖတ်နေ။ အဆိုပါ dopamine စနစ်ကလည်း opiates အပါအဝင်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး, ရန်စေ့စ့စပ်စပ်တုံ့ပြန်, အရက် နှင့် ကိုကင်း။ ဒီဆေးတွေကသဘာဝဆုလာဘ်ထက်ပိုမိုအားကောင်း activation ကျလာသောနိုင်ပြီး, သဘာဝဆုလာဘ်နဲ့မတူဘဲသူတို့ကမွတ်မပြေစေပါဘူး။
ဤအဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့အနက်အဆိုပါ dopamine စနစ်ကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အပျော်အပါးလမ်းကြောင်း ဦးနှောက်ထဲမှာ။ ဒါကအလားအလာတိရစ္ဆာန်များနှင့်လူများတို့သည် dopamine အာရုံခံမျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စေဖို့ခလုတ်သို့မဟုတ်တွန်းအားပေးခရိုနီနှိပ်ဖို့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ရှင်းပြသည်။ တချို့မူးယစ်ဆေးဒါများမှာအဘယ်ကြောင့်ဒါဟာအစကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါ, စွဲလမ်းစေ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြင်းထန်သောနှင့်ကြာရှည်စွာတက်ကြွခြင်းသည်ဆေးဝါးများကို ပို၍ ပင်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်စေသည်။
သို့သော်များစွာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များလှုံ့ဆျောမှု, arousal, အာရုံစူးစိုက်မှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သင်ယူမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအပါအဝင်အကျိုးကို၏အချိန်အနီးပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သကြားလုံးကမ်းလှမ်းတဲ့အရောင်းစက်အားဖြင့်ဖြတ်သန်းမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သငျသညျငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများကလှုံ့ဆော်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်အာရုံကိုစက်မှရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်ကချဉ်းကပ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုပိုပြီးတပ်လှန့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ သင်သကြားလုံးစားရပြီးတာနဲ့သင်ကအရသာကိုခံစားရသည်, သင့်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်နှင့်အတူအရောင်းစက်ပေါင်းသင်းသိတော့, သင်၏ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဒါဟာ dopamine သည့်စနစ်အစားရုံအပျော်အပါးနှုန်း se ထက်ကဤလုပ်ငန်းစဉ်များအများအပြားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။
willpower နှိုင်းယှဉ် Dopamine
dopamine လုပ်ဆောင်ချက်၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ aspects တစ်ခုမှာလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ သုတေသီများက dopamine အာရုံခံများသည်ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောမျှော်လင့်ချက်များသည်လက်တွေ့နှင့်မကိုက်ညီပါကသူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုယုံကြည်သည်။ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှား'' သင်ယူမှုမောင်း။ ဥပမာအားဖြင့် dopamine အာရုံခံဆဲလ်များသည်မျှော်လင့်မထားသည့်အကျိုးကျေးဇူးများဖြင့်လှုံ့ဆော်ခံရသည်၊ သို့သော်မျှော်လင့်ထားသည့်အခါ၎င်းတို့သည်နှိမ်နင်းခြင်းခံရသည် ဆုလာဘ် ရုပ်လုံးပေါ်လာဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
dopamine activation အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဖြစ်ရပ်များဆုလာဘ်နှင့်အတူဆက်စပ်ဖြစ်လာများနှင့်လျှောက်လျော့နည်းခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လျက်ရှိသောသူတို့ကိုစိတ်ပျက်မိကြောင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်နေလျက်ရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မပြောင်းလဲသောသည်ဆိုပါက, ရှိသမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ရရှိရန်လုပ်ဖို့လိုအပ် dopamine အာရုံခံကိုသက်ဝင်သူတို့ကိုဖိနှိပ်သောသူမြားကိုရှောင်ရှားကြောင်းလုပ်ရပ်များအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့မသိဘဲ dopamine activation နှင့်အတူပေါင်းသင်းမှုအရာမှပူးတွဲပါအောင်အဖြစ်သင်ယူကြောင်း dopamine activation သွေးဆောင်၏အများကြီးအသိအမြင်ရှိသည်မြင့်မားမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကမကြာခဏထင်ရသောအဓိပ်ပါယျမရှိသောသို့မဟုတ် maladaptive ရွေးချယ်မှုအောင်အဘယ်ကြောင့်အသိအမြင်၏ဤမရှိခြင်းကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ကင်းတာကိုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဆိုပါစို့။ ကိုကင်းကနေအပျော်အပါးသဘာဝဆုလာဘ်များကဲ့သို့ဝစှာကြှေးပါဘူးကြောင့်, dopamine activation နှင့်ဤအရပ်မှမူးယစ်သွေးဆောင်သင်ယူမှု, အမှန်တကယ်ပိုက်အဆိုပါစှဲလမျးသူမှရေးဆွဲသော object တစ်ခုအောင်, အအက်ကွဲပိုက်၏အသီးအသီး puff နှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဦးနှောက်သုတေသနစွဲအတွက် dopamine များ၏သက်ရောက်မှုကိုကျော်လွှားဖို့အသုံးပြုရနိုင်သလား? အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တက်ကြွစွာလိုက်ရှာနေကြတယ် မူးယစ်ဆေးဝါးဖန်တီးမှု ကြောင်းစွဲလမ်းအတွက် dopamine အားဖြင့်သွေးဆောင်သင်ယူမှုပိတ်ဆို့။ သို့သော်သူတို့ခဲ့ကြ ကန့်သတ်အောင်မြင်မှု, အဘို့ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောခံစားမှုသတိပေးချက်အဖြစ် dopamine ၏အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာ, ပိတ်ဆို့ခြင်းလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပျော်ရွှင်မပါဘဲတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ကွက်သင်ယူမှုကိုဖန်တီးရန်ခက်ခဲသည်။
Dopamine-သွေးဆောင်သင်ယူမှုဆက်ဆက်စွဲနောက်ကွယ်မှတပြင်လုံးကိုပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်စွဲ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လူ့ဆင်ခြင်ခြင်းကျော်လွှားနိုင်သောအရာတစ်ခုခုရှိမရှိစဉ်းစားသင့်ကြောင်းအကြံပြုထားဘူး။ အလားတူကောင်းကောင်းလည်းထိုကဲ့သို့သောကျော်အဖြစ် willpower ၏အခြားနေ့စဉ်သုံးမအောင်မြင်မှုများ, လျှောက်ထားပေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အထူး ဦးနှောက် cortex ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များထိန်းချုပ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စရိုက် dopamine စနစ်သည်အလွန်ကောင်းစွာက၎င်း၏ဆရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။